Calanka TV – 2016 – August
Diyaarad laga leeyahay Qadar oo motoorka dab ka kacay: VIDEO
Diyaarad laga leeyahay dalka Qadar ayaa si deg-deg ah ugu degtay garoonka Ataturk ee magaalada Istanbul kaddib markii uu dab ka kacay mid ka mid ah matooradeeda.
by calanka —	August 19, 2016 —	Video
Bilicda beerta nabadda ee magaalada Muqdisho: VIDEO
Barnaamijkan gaaban waxaan ka soo diyaarinay beerta Nabadda ee magaalada Muqdisho oo ah goob loo dalxiis tago islamarkaana ay bulshadu ku nasato.
by calanka —	August 19, 2016 —	Music, Video
Bandhigga buugaagta Muqdisho: SAWIRRO
Magaalada Muqdisho waxaa dhawaan ka furmay bandhigga buugaagta oo noqonaya kii labaad ee lagu qabto caasimadda Soomaaliya.
by calanka —	August 19, 2016 —	Sawirro
Dab xooggan oo barakicin ka wada gobolka California: SAWIRRO
Dab-damiska magaalada San Bernardino ee gobolka California ayaa ku mashquulsan daminta dab xooggan oo barakicin iyo burbur geystay. Dabkan ayaa xooggiisa ka socda hareeraha wadada dheer ee Swarthout Canyon Road.
by calanka —	August 18, 2016 —	Sawirro
Ilmo “bac” ku jira oo ku dhashay isbitaal ku yaal Brazil: VIDEO
Dhakhaatiirta isbitaalka Santa Casa hospital ee magaalada Sao Paulo ayaa fajacay kaddib markii ay arkeen ilmo dhashay isagoo ku wali ku jira baxda madheerta.
by calanka —	August 17, 2016 —	Video
Qaabkii uu u dhacay xukunka xabsiga ee ciidamada AMISOM
Shalay waxaa magaalada Muqdisho mar labaad lagu maxkamadeeyay ciidamadii AMISOM ee lagu qabtay iyaga oo iibsanaya agabka ciidan, waxaana la xukumay sagaal ka mid ah.
Masri salaan ka qaadi waayay Yuhuudi la tartamayay: VIDEO
Masri ciyaara ciyaarta loo yaqaan Judo oo lagu magacaabo Islam El Shehaby islamarkaana ka qeyb-qaadanayay ciyaaraha Olombikada Rio ayaa laga soo eryay ciyaaraha kaddib markii uu salaanta ka qaadi waayay Or Sasson oo kasoo jeeda dalka Israel oo la tartamayay.
by calanka —	August 16, 2016 —	Sports
Taageere feer dhulka la dhigay boortayeeri: SAWIRRO
Goolhayaha kooxda Östersund Aly Keita ayaa waxaa soo weeraray oo feer dhulka la dhigay taageere ka tirsan kooxda Jönköpings Södra IF oo ay ciyaarwada dhex mareysay.
by calanka —	August 16, 2016 —	Sawirro
Lammaane shiineys ah oo isku guursaday ciyaaraha Rio: VIDEO
Gabadha dalka Shiinaha u mataleysa ciyaaraha dabaasha ee Olombikada Riyo ayaa lamaaneheeda waxa ay ku guursatay magaalada Rio eedalka Brasil kaddib markii uu usoo bandhigay.
Booliska Ingriiska oo dilay ciyaaryahan hore: VIDEO
Booliska magaalada Telford ayaa xalay dilay ciyaaryahan hore oo u ciyaari jiray kooxda Aston Villa kaas oo lagu magacaabau Dalian Atkinson (48-jir). Ciyaaryahankan ayaa waxaa ay boolisku ku dhifteen bastooladda korontada.
by calanka —	August 15, 2016 —	Sports
Maxaad kala socotaa sida looga caweeyo Muqdisho xilliyada habeenkii?: VIDEO
Goob-jooge aad u nasiib badan oo ka warbixinaya wixii uu kula kulmay Zope qaraxa ka hor iyo ka dib: VIDEO
Sidee ayay ku waabariisatay saakay subax goobtii uu qaruxu ka dhacay shalay ee Zope?: SAWIRRO